Factory Skid Dehydration | China Dehydration Skid Manufacturers, Suppliers
3 MMSCD Fitaovana fanamainana entona namboarina ho an'ny entona voajanahary
Manam-pahaizana manokana amin'ny fitrandrahana solika sy entona tany an-tsaha izahay, fanadiovana entona voajanahary, fitsaboana menaka maloto, fanarenana hydrocarbon maivana, orinasa LNG ary mpamokatra entona voajanahary.
Fanalana rano vita amin'ny entona voajanahary nataon'ny TEG Dehydration Unit
TEG Dehydration dia manondro fa ny entona voajanahary tsy misy rano dia mivoaka avy eny an-tampon'ny tilikambo hisakana ny fiasan'ireny ary mivoaka ao amin'ny vondrona aorian'ny fifanakalozam-panafana sy ny fanerena amin'ny alàlan'ny mpanakalo hafanana entona maina.
Glycol dehydration ho an'ny entona voajanahary
Ny fizotry ny tsy fahampian-drano amin'ny glycol Rongteng dia manala ny etona rano amin'ny entona voajanahary, fitaovana fitsaboana entona voajanahary, izay manampy amin'ny fisorohana ny fiforonan'ny rano sy ny harafesina ary mampitombo ny fahombiazan'ny fantsona.
Ny tsy fahampian-drano amin'ny molecular sieve
Ny skid dehydration molecular sieve dia fitaovana lehibe amin'ny fanadiovana entona voajanahary na fanadiovana entona voajanahary. Ny sivana molekiola dia kristaly aluminosilicate metaly alkali miaraka amin'ny firafitry ny rafitra sy ny rafitra microporous fanamiana.